बाँकेमा भत्कियो सत्तागठ्बन्धन, कार्यपालिका निर्वाचनमा कुन-कुन दल वीच भएको छ गठबन्धन ? | गोचाली खवर
Home मुख्य समाचार बाँकेमा भत्कियो सत्तागठ्बन्धन, कार्यपालिका निर्वाचनमा कुन-कुन दल वीच भएको छ गठबन्धन ?
बाँकेमा भत्कियो सत्तागठ्बन्धन, कार्यपालिका निर्वाचनमा कुन-कुन दल वीच भएको छ गठबन्धन ?
१३ जेष्ठ, २०७९
बाँके, १३ जेष्ठ, २०७९ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका सत्तागठ्बन्धन दल वीचको गठ्बन्धन मत परिणाम सार्वजनिक भए लगतै भत्किएको छ । नेपाली काँग्रेसले नेपालगन्जको कार्यपालिका निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) रुष्ट भएको छ ।
जसपाले नेपालगन्जको कार्यपालिका निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाका लागि महिला, दलित र अल्पसंख्यकबाट आठ जना सदस्य चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जसपा र एमालेले चार–चार जना सदस्य पाएको जसपाका केन्द्रिय सदस्य हिकमत विकले बताए ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपासँग तालमेल गरेको काँग्रेसले नेपालगन्जको कार्यपालिकामा चार सदस्यमा उम्मेदवार दिएको छ । भने, राप्रपा र माओवादी केन्द्रले दुई–दुई जना सदस्य पाएका छन् ।
त्यसैगरि, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एमालेको एकल बहुमत पुगेको छ । एमालेले पाँच वडा प्यानलसहित जितेको छ । एमालेको मतभार २५ छ । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसले माओवादी केन्द्र र राप्रपासँग तालमेल गरेको छ । तीन दल मिल्दा पनि एमालेले जित्ने निश्चित भएको राप्रपाबाट वडा अध्यक्ष जितेका वडा नं. ६ का अध्यक्ष लवराज खरेलले बताए ।
राप्तीसोनारीमा माओवादी केन्द्रले तीन र राप्रपाले एक वडा प्यानलसहित जितेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको काँग्रेस वडामा निल भएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका निर्वाचनमा एमाले–जसपा गठबन्धन विजयी
डुडुवा गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा एमाले–जसपा गठबन्धनले जितेको छ । त्यहाँ जसपा र एमालेले तीन–तीन जना सदस्य बाँडेका छन् । जम्मा ४२ मतभार रहेको डुडुवामा एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवारले २४ र काँग्रेसका उम्मेदवारले ८ मत पाएका छन् । शुक्रवार भएको कार्यपालिका निर्वाचनमा ६ वटै पदमा एमाले–जसपा गठबन्धनले जितेको निर्वाचन अधिकृत फटिकराज मुडभरीले जानकारी दिए ।
Previous articleसामाजिक दायित्व अन्तरगत सेतोखरी मिडियाद्वारा विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान
Next articleजनप्रतिनिधिको अग्रसरता : शिक्षामा फड्को मार्दै नरैनापुर